နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၅) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on September 24, 2014 at 11:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒီနေ့ အပိုင်း (၅) မှာ အချိန်ကို ဖော်ပြရာမှာ အသုံးဝင်မယ့် အသုံးအနှုန်းတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Margaret : What time is it ?
Tom : It’saquarter to five.
Margaret : Aren’t we supposed to be at Jim’s house by five o’clock?
Tom : Five or five – thirty. He said it didn’t make any difference.
Margaret : Then maybe we could pick your suit up at the cleaners .
Tom : Sure , we have plenty of time .
အင်္ဂလိပ်လို အချိန်ပြောတဲ့အခါ သဘာဝကျပြီး အများဆုံးသုံးကြတဲ့ ပြောဆိုပုံဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဒီလိုလည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ It’saquarter of five. (စကားပြောမှာ It’s four forty-five. လို့မပြောပါဘူး။) ထိုးပြီး ၁၅ မိနစ် ကို ဒီလိုပြောကြတယ်။ It’saquarter after five. It’saquarter past five. တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုပြောတာလည်း ကြားရပါတယ်။ It’s five-fifteen. (စကားပြောတွေမှာတော့ ကြားရခဲပါတယ်။) ထိုးပြီး နာရီဝက် ဥပမာ ၅ နာရီခွဲ ကို It’s half past five. လို့ ပြောတယ်။
အင်္ဂလိပ် မှာအချိန်ပြောရင် ထိုးဖို့ ၁၅ မိနစ်၊ ထိုးပြီး ၁၅ မိနစ်၊ နာရီဝက် တွေကို နံပါတ်နဲ့ ထည့်ပြော လေ့မရှိဘူး လို့ အလွယ်မှတ်လို့ရတယ်။
quarter to five (or) quarter of five
quarter past five (or) quarter after five
အဲဒါတွေက လွဲလို့ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေကို နံပါတ်ထည့် ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ၅ နာရီ ၂၀ မိနစ်ကို twenty past five (သို့မဟုတ်) twenty after five ၊ ၅ နာရီ ထိုးဖို့၁၀ မိနစ်ကို ten to five (သို့မဟုတ်) ten till five စသည်ဖြင့် ပြောတယ်။
အချိန်ပြောရင် အရှေ့က It's ကိုထည့်ပြောရတယ်။ အများအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့က It's ကို ဖြုတ် ပြောကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေaကိုလည်း ထပ်ပြီး ဖြုတ်ပြောကြတယ်။
..…a quarter to five.
…….quarter to five.
Aren’t we supposed to be at Jim’s house by five o’clock?
ဒီနေရာမှာ negative question သုံးထားတာက မေးတဲ့သူရဲ့ ထင်မြင်ချက် သေချာတယ်လို့ ယူဆရင် သုံးတယ်။ ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကလည်း ဒါကြောင့် affirmative response ခေါ် မေးသူရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို ထောက်ခံတဲ့ အဖြေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Supposed to ဆိုတာက expected to တို့ oblidged to တို့ စတဲ့ မလုပ်မနေရ လုပ်ရန်ဆိုတဲ့ စကားစုနဲ့ အဓိပ္ပါယ် တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ required to (လုံးဝ လုပ်ကို လုပ်ရမယ်) လောက် မတင်းကြပ်ပါဘူး။ Suppose to မှာ suppose ကို passive voice နဲ့ပဲသုံးပါတယ်။ အောက်ပါ ဥပမာ တစ်ချို့ကို ကြည့်ပါ။
I am supposed to prepareaprogramme for our English club next week.
They were supposed to be here an hour ago- I don't know where they can be.
We are supposed to practice the dialogues at home, too.
By five o'clock ဆိုတာ not later than five o'clock နှင့်အတူတူပါဘဲ။ (၅ နာရီ ထက် နောက် မကျ စေရ။)
He said it didn’t make any difference.
ဒီစကားကို written English မှာ reported speech နဲ့ ရေးရင် ဒီလိုရေးမယ်။ He said that it didn’t make any difference. ဒါပေမဲ့ conversation စကားပြောမှာ reported speech ကို conjunction 'that' ဖြုတ်ပြောရတယ်။
ရာခိုင်နှုန်းများကို ရေးသားပုံ - Percent (ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် Percen...
Giving Directions (လမ်းညွှန်ပေးခြင်း)
Permalink Reply by U Hla Win Zaw on October 3, 2014 at 13:51
I h'd just reading that dialogues.